के यो महाभूकम्प नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ? भट्टराईले प्रस्तुत गरे नवनिर्माणको मोडेल - Nepaliwebsite.com
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले महाभूकम्पले सिर्जना गरेको विनासलाई नवनिर्माणको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले विनाशबाट माथि उठेर नयाँ ढंगले राष्ट्र निर्माण गरेका उदाहरण दिँदै राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ संयन्त्रहरुको निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'अब केही दशकको राजनीति परम्परागत ढंगले हिँडेर अगाडि बढ्न सक्दैन', भट्टराईले भने, 'राजनीतिमा पनि अब एक ढंगको क्रमभंगता नभइकन, राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’लाई नयाँ ढंगले नउठाइकन; जनतालाई ‘डेलिभरी’ गर्न सक्ने, तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्ने, जुन पैदा भएको नयाँ अन्तरविरोध छ त्यसको हल गर्न सक्ने नीति, कार्यक्रम र नेतृत्व नभइकन अबको राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन।'
आफ्ना विचार, पार्टी, समूहभन्दा माथि उठेर राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने प्रयत्न र संकल्प गर्न भट्टराईले आग्रह गरे।
के छ त नवनिर्माणका लागि भट्टराईको मोडल? पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकलाई गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ:
तत्काल ध्यान दिनुपर्ने तीन क्षेत्रअब हामीले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने तीनवटा क्षेत्र छन् भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो, उद्धार र प्रारम्भिक राहतको चरण हो त्यो करिब–करिब पूरा हुँदैछ तर त्यो अझै पूरा हुन सकिराखेको छैन। हिजोमात्रै गृहमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यांकअनुसार हामीलाई झण्डै ६ लाख बराबरका पालहरु तत्काल चाहिएको छ तर आधामात्रै (उहाँले भन्नुभयो २ लाख ६६ हजार) पनि हामीले पुर्‍याउन सकिराखेका छैनौं। कैयौं दूरदराजका ठाउँहरुमा अहिले पनि हेलिकोप्टर पुग्न सकिराखेको छैन। गोरखादेखि लिएर रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकसम्मका दूरदराजका पहाडी बस्तीहरुमा अहिले पनि सरकारको पहूँच पुग्न सकिराखेको छैन। त्यसैले उद्धार र राहतको प्रारम्भिक चरणको काम पूरा भइसक्यो भनेर सोच्नु हुँदैन। त्यतापट्टि आवश्यक ध्यान पुगोस्।
नमूनायोग्य नयाँ नेपालम आर्टिटेक्ट इन्जिनियर र ‘अरबान रिजनल प्लानिङ’को विद्यार्थी भएको नाताले गर्दा पनि मैले प्राविधिक ढंगले पनि भन्न सक्छु हामीले तत्काल योजना बनाएर त्यो गर्न सक्छौं र त्यो सम्भव छ। त्यसको निम्ति रकमको समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा आउँछ। तर त्यसो होइन।
भिजनरी नेतृत्वको परिकल्पनायी सबैका निम्ति मूल राजनीतिक नेतृत्व नै प्रमुख कुरा हो। यतिबेला आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर म छँदैछु, मैले सबैथोक गर्छु, मेरै पार्टीले सबैथोक गर्छ भन्ने सोचियो भने पुग्दैन। बृहत् राष्ट्रिय एकता आजको खाँचो हो। त्यसको निम्ति हामीले कुन ढंगले हुन्छ सोचौं। भिजन सहितको दह्रो नेतृत्व अगाडि आएर अथवा हामीमध्ये नै को हुनसक्छ, हामी पुरानाले लोभ नगरौं नयाँ व्यक्तिलाई अगाडि सारेर त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय सरकार, कमसेकम केही वर्ष, केही दशक राष्ट्रिय सरकार बनाएर अगाडि जाने, भिजनरी नेतृत्वको परिकल्पना हामीले गरौं। त्यसको मातहतमा राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण बनाऔं। त्यसको अनुगमन गर्नको निम्ति तीन तहको निर्देशनकारी र अनुगमनकारी सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरौं। जुन केन्द्रमा होस्, जिल्लामा होस् र गाउँगाउँमा होस्। त्यसको साथसाथै दशौं लाख युवा स्वयंसेवक छन्, विदेशमा गएका नेपालीहरु छन् उनीहरुलाई आह्वान गरेर ‘भोलेन्टियर फोर्स’ निर्माण गरौं। राष्ट्रिय निर्माण ‘भोलेन्टियर’ भनेर जुन ‘पिस कोर्प भोलेन्टियर’ अमेरिकामा बनाइएको थियो त्यस्तै पुन:निर्माण भोलेन्टियर दशौं लाखको संख्यामा हामीले बनाऔं। यसरी अभियान चलाएर दशौं खर्ब रुपैयाँ उठाएर नयाँ नेपालको अभियान सुरु गर्न सक्छौं। त्यसैले यो चुनौतिलाई नयाँ अवसरको रुपमा प्रयोग गरौं।
(साभार : पहिलो पोस्ट)